Nebulizer ဆိုတာဘာလဲ – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Nebulizer ဆိုတာ ရငျကွပျဝဒေနာရှငျတှအေတှကျတော့ မရှိမဖွဈ စကျတဈခုလို့ ဆိုရပါလိမျ့မယျ။ ‘တရှီရှီ’မွညျအောငျ သလေုမွောပါး ကွပျနတေဲ့ မောပနျးနတေဲ့ အဆုတျတှအေတှကျ Nebulizer ကောငျးကောငျးတဈခုက ထှကျလာတဲ့ ဆေးငှတှေ့ကေ စိနျတှေ ရှတှေထေကျ အဖိုးတနျတာပေါ့။ Nebulizer ဆေးငှရှေူ့စကျကို ပနျးနာရငျကွပျရောဂါ၊ နာတာရှညျ အဆုတျလပွှေနျရောငျရောဂါ၊ အဆုတျရောငျရောဂါ စတာတှအေပွငျ ရငျကွပျစတေဲ့ တခွား အဆုတျရောဂါတှအေားလုံးမှာ ကလေး လူကွီးမရှေး အသုံးပွုရပါတယျ။ ဆေးရုံဆေးခနျးတှအေတှကျ မရှိမဖွဈ စကျတဈခုဖွဈသလို ရငျကွပျတတျရငျ အိမျမှာဆောငျထားဖို့လညျး လိုအပျပါတယျ။
?ဘာလို့ Omron brandကိုမှရှေးသငျ့တာလဲ ??
ဂပြနျအခွစေိုကျ Omron ဟာ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ ထုတျကုနျတှမှော အရညျအသှေးပိုငျး နညျးပညာပိုငျး ယုံကွညျစိတျခရြမှု အပိုငျးတှမှော ထိပျတနျးလို့ ဆိုလို့ရပါတယျ။ ကမ်ဘာ့နိုငျငံပေါငျး ရာနဲ့ခြီပွီး Omron product တှကေို ကကြေနြေပျနပျ အသုံးပွုနကွေပါတယျ။ Omron product တှရေဲ့ အဓိက အားသာခကျြကတော့ ကွံ့ခိုငျမှု၊ အသုံးပွုရ ရိုးစငျးလှယျကူမှုနဲ့ အဆငျ့မွငျ့တဲ့ နညျးပညာတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
?Omron Nebulizer တှရေဲ့ အားသာခကျြတှကေ ဘာတှလေဲ ??
မှေးကငျးစကလေးတှေ၊ ကလေးငယျတှေ အသုံးပွုဖို့ဆိုရငျ စကျသံတိုးနမှေဖွဈမှာပါ။ ကွောကျတတျတဲ့ လူကွီးသူမတှအေတှကျလညျး စကျသံကယျြကယျြလောငျလောငျက တကယျ့ပွဿနာပါ။ ရငျကွပျမပြောကျခငျ သှေးတကျသှားနိုငျပါတယျ။ Omron Nebulizer စကျတှကေ စကျသံ 52dBအောကျထိ အသံတိုးအောငျ လုပျဆောငျထားလို့ အဆငျပွစေမှောပါ။ အခြို့modelတှမှောဆို 45dBအောကျအထိတောငျ အသံတိုးတာမို့ အတိုငျးထကျအလှနျပေါ့။
နမေကောငျး အသကျရှူမဝ မောပနျးနခြေိနျမှာ ကိုယျ့ခန်ဓာကိုယျတောငျ မသယျခငျြ မလှုပျရှားခငျြကွပါဘူး။ ဒီတော့ ကွီးမားလေးလံတဲ့ nebulizer ကွီးကို မရ၊ ရှရေ့ နရောခရြတာလညျး ရငျကွပျနသေူတဈယောကျအတှကျ တကယျ့ဝနျထုပျဝနျပိုးပါပဲ။ Omron nebulizer တှကေိုတော့ အလှနျပေါ့ပါးအောငျ ကဈြလဈြတဲ့ ဒီဇိုငျးဖွဈအောငျ ပွုလုပျထားလို့ ကူညီမဲ့သူမရှိလညျး ဝဒေနာရှငျကိုယျတိုငျ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကိုယျတှယျ တပျဆငျ အသုံးပွုနိုငျစမှောပါ။
အသုံးပွုဖို့ လိုအပျတဲ့ ပစ်စညျး အစုံအလငျပါဝငျတဲ့အပွငျ ဘယျသူမဆို အလှယျတကူ အသုံးပွုနိုငျအောငျ ရိုးရိုးရှငျးရှငျး ဒီဇိုငျးပွုလုပျထားလို့ ဝဒေနာရှငျကိုယျတိုငျ အခကျအခဲမရှိ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
?ထိရောကျသော ကုသမှုအတှကျ လုံလောကျ တိကသြော ဆေးငှကေို့ ထုတျလှတျပေးနိုငျခွငျး ဒါကတော့ တကယျ့ကို အရေးအကွီးဆုံး အခကျြပါ။
Nebulizer စကျတဈလုံးရဲ့ အဓိကရညျရှယျခကျြသညျ ရငျကွပျ အမှနျတကယျ မွနျမွနျသကျသာစဖေို့ပါပဲ။ ဒီတော့ ဆေးငှကေို့ ပမာဏတိတိကကြနြဲ့ ထိထိရောကျရောကျ ထုတျလှတျပေးနိုငျဖို့ လိုပါတယျ။ Omron nebulizer တှဟော3micro metre လောကျအထိတောငျ သေးငယျတဲ့ ဆေးငှအေ့မှုနျလေးတှကေို ထုတျလှတျပေးနိုငျတာကွောငျ့ ကုသမှုကို အခြိနျတိုတိုနဲ့ အမှနျတကယျ ထိရာကျစပေါတယျ။
Vartual valve နညျးပညာအသုံးပွုထားတဲ့အတှကျ လိုအပျတဲ့ ဆေးပမာဏကို ရရှိစပွေီး ဆေးလလှေငျ့ဆုံးရှုံးမှုကိုလညျး ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
Omron နဲ့အတူ ရငျကွပျဝဒေနာကို ကြျောလှား အံတုနိုငျကွပါစေ..
Nebulizer ဆိုတာ ရင်ကြပ်ဝေဒနာရှင်တွေအတွက်တော့ မရှိမဖြစ် စက်တစ်ခုလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ‘တရွှီရွှီ’မြည်အောင် သေလုမြောပါး ကြပ်နေတဲ့ မောပန်းနေတဲ့ အဆုတ်တွေအတွက် Nebulizer ကောင်းကောင်းတစ်ခုက ထွက်လာတဲ့ ဆေးငွေ့တွေက စိန်တွေ ရွှေတွေထက် အဖိုးတန်တာပေါ့။ Nebulizer ဆေးငွေ့ရှူစက်ကို ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ၊ နာတာရှည် အဆုတ်လေပြွန်ရောင်ရောဂါ၊ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ စတာတွေအပြင် ရင်ကြပ်စေတဲ့ တခြား အဆုတ်ရောဂါတွေအားလုံးမှာ ကလေး လူကြီးမရွေး အသုံးပြုရပါတယ်။ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေအတွက် မရှိမဖြစ် စက်တစ်ခုဖြစ်သလို ရင်ကြပ်တတ်ရင် အိမ်မှာဆောင်ထားဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
?ဘာလို့ Omron brandကိုမှရွေးသင့်တာလဲ ??
ဂျပန်အခြေစိုက် Omron ဟာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်တွေမှာ အရည်အသွေးပိုင်း နည်းပညာပိုင်း ယုံကြည်စိတ်ချရမှု အပိုင်းတွေမှာ ထိပ်တန်းလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ရာနဲ့ချီပြီး Omron product တွေကို ကျေကျေနပ်နပ် အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ Omron product တွေရဲ့ အဓိက အားသာချက်ကတော့ ကြံ့ခိုင်မှု၊ အသုံးပြုရ ရိုးစင်းလွယ်ကူမှုနဲ့ အဆင့်မြင့်တဲ့ နည်းပညာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
?Omron Nebulizer တွေရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ ??
မွေးကင်းစကလေးတွေ၊ ကလေးငယ်တွေ အသုံးပြုဖို့ဆိုရင် စက်သံတိုးနေမှဖြစ်မှာပါ။ ကြောက်တတ်တဲ့ လူကြီးသူမတွေအတွက်လည်း စက်သံကျယ်ကျယ်လောင်လောင်က တကယ့်ပြဿနာပါ။ ရင်ကြပ်မပျောက်ခင် သွေးတက်သွားနိုင်ပါတယ်။ Omron Nebulizer စက်တွေက စက်သံ 52dBအောက်ထိ အသံတိုးအောင် လုပ်ဆောင်ထားလို့ အဆင်ပြေစေမှာပါ။ အချို့modelတွေမှာဆို 45dBအောက်အထိတောင် အသံတိုးတာမို့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့။
နေမကောင်း အသက်ရှူမဝ မောပန်းနေချိန်မှာ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်တောင် မသယ်ချင် မလှုပ်ရှားချင်ကြပါဘူး။ ဒီတော့ ကြီးမားလေးလံတဲ့ nebulizer ကြီးကို မရ၊ ရွှေ့ရ နေရာချရတာလည်း ရင်ကြပ်နေသူတစ်ယောက်အတွက် တကယ့်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးပါပဲ။ Omron nebulizer တွေကိုတော့ အလွန်ပေါ့ပါးအောင် ကျစ်လျစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားလို့ ကူညီမဲ့သူမရှိလည်း ဝေဒနာရှင်ကိုယ်တိုင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကိုယ်တွယ် တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်စေမှာပါ။
အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်း အစုံအလင်ပါဝင်တဲ့အပြင် ဘယ်သူမဆို အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်အောင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားလို့ ဝေဒနာရှင်ကိုယ်တိုင် အခက်အခဲမရှိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
?ထိရောက်သော ကုသမှုအတွက် လုံလောက် တိကျသော ဆေးငွေ့ကို ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်ခြင်း ဒါကတော့ တကယ့်ကို အရေးအကြီးဆုံး အချက်ပါ။
Nebulizer စက်တစ်လုံးရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် ရင်ကြပ် အမှန်တကယ် မြန်မြန်သက်သာစေဖို့ပါပဲ။ ဒီတော့ ဆေးငွေ့ကို ပမာဏတိတိကျကျနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ Omron nebulizer တွေဟာ3micro metre လောက်အထိတောင် သေးငယ်တဲ့ ဆေးငွေ့အမှုန်လေးတွေကို ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်တာကြောင့် ကုသမှုကို အချိန်တိုတိုနဲ့ အမှန်တကယ် ထိရာက်စေပါတယ်။
Vartual valve နည်းပညာအသုံးပြုထားတဲ့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဆေးပမာဏကို ရရှိစေပြီး ဆေးလေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Omron နဲ့အတူ ရင်ကြပ်ဝေဒနာကို ကျော်လွှား အံတုနိုင်ကြပါစေ..